Xaalada Dhuusa Mareeb oo saaka degan, kadib dagaaladii cuslaa ee shalay ka dhacay – STAR FM SOMALIA
Dadkii ka qaxay dagaalada ayaa dib ugu soo laabtay, waxaana saaka dib loo furay goobihii waxbarashada iyo ganacsiga.
Ciidamo fara badan oo ka tirsan Ahlusuna ayaa ku sugan gudaha iyo duleeyada magaalada, iyagoo adkeynaya ammaanka magaalada.
Saraakiisha Ahlusuna ayaa ugu baaqay shacabka inay is dejiyaan, ammaankana uu wanaagsan yahay, hase ahaatee waxaa jirta cabsi laga qabo in mar kale uu dagaal dhaco.
Ciidamada Ahlusuna ayaa shalay gacanta ku dhigay Liibaan Madaxweyne oo horay uga falaagoobay Ciidamada dowladda, kuna biiray Ahlusuna, balse maalmihii u dambeeyay uu u dhaxeeyay muran ku aadan inuu soo wareejiyo hubkiisa.
Dhinaca kale Maamulka Galmudug ayaa iska fogeeyay eedeynta loogu soo jeediyay inay qeyb ka ahaayeen dagaalkii shalay, waxaana Wasiirka Warfaafinta Galmudug uu ku tilmaamay eedeymahaas kuwo been abuur ah.
Ahlusuna ayaa gacanta ku heysa degmooyinka Guriceel iyo Dhuusa Mareeb, halkaasoo sanadkii hore ay kala wareegeen ciidamada dowladda, waxaana ay qaadacday Maamulka Galmudug ee lagu dhisay Cadaado.